कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन आज : सात प्रदेशमा को-कोबीच हुँदैछ भिडन्त ? « Deshko News
कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन आज : सात प्रदेशमा को-कोबीच हुँदैछ भिडन्त ?
देश संघीयतामा गएपछि कांग्रेसले पार्टीको संगठनलाई संघीय संरचना पनि त्यहीअनुसार ढालेको छ । जसअनुसार कांग्रेसले वडा, पालिका, प्रतिनिधिसभारप्रदेश क्षेत्रीय, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमिति बनाएको छ । बुधबारसम्म कांग्रेसका ६१ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । बिहीबार एकसाथ सातै प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन सुरु हुँदै छ ।
१४औँ महाधिवेशनपछि कांग्रेसले आफूलाई संघीय संरचनामा रूपान्तरण गर्न पहिलोपटक प्रदेश अधिवेशन गर्न लागेको हो । कांग्रेस कार्यतालिकाअनुसार बिहीबार प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन हुनेछ । १७ गते मनोनयन र १८ मंसिरमा निर्वाचन हुनेछ ।
कांग्रेस निर्वाचन समितिले प्रदेश अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएका जनाएको छ । निर्वाचन समिति सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठले सबै तयारी पूरा गरी प्रदेश अधिवेशनका लागि निर्वाचन अधिकृत खटाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सात प्रदेशका लागि तीन–तीनजनाका दरले २१ अधिकृत तोकिएको छ ।
कांग्रेसले प्रदेशमा सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र एक महिलासहित तीन सहमहामन्त्री रहने गरी व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश कार्यसमिति सदस्यहरू पनि प्रदेशमा रहनेछन्। कोषाध्यक्ष भने मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। बिहीबार मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छन् । शुक्रबार उम्मेदवारी दर्ता गर्ने र १८ गते मतदान हुँदैछ ।